मानिसले किन राख्छन् पशुसँग लुकीलुकी सम्बन्ध ?
बीबिसी- भारतमा एक ग र्भवती बाख्रालाई मानिसहरुले सा’मू हिक ब’ला त्कार गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा आयो । भारतकाे हरियाणा मेवात इलाकामा २५ जुलाईमा ग र्भव ती बाख्राको सामू’हिक ब’ला त्कार भयाे ब’लात्कार पछि भोलिपल्ट बाख्राको मृ’त्यु भएको खबरले भारतमा हंगामा नै मच्चायाे ।
जनावरसँग ‘से’ क्स’ गर्नुलाई अंग्रेजीमा बेस्टिएलिटी भनिन्छ । यसको अर्को एक अर्थ पनि छ ‘अति क्रू’ र व्यवहार’ ।अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार कुनै व्यक्ति र जनावरबीचको शा’री रिक स म्प’र्कलाई बेस्टिएलिटी भनिन्छ ।
नेसनल सेन्टर फर वायोटेक्नोलोजी इन्फरमेसन अर्थात एनसीबीआई वेबसाइटका अनुसार कुनै व्यक्तिले जनावरसँग से ’क्स गर्नु ज्यादै गम्भीर विषय हो । तर जनावरमाथि हिं’ साका जुन मु’द्दा दर्ता हुन्छन्, त्यसमा यस प्रकारका मु’द्दा निकै कम हुन्छन् । यो द’ण्डनीय अ’प राध हो ।
डा. रैनाको बिचारमा बेस्टिएलिटी मुख्य दुई कारणले हुन सक्छ । एक, यौ’ न कु’ण्ठा र अर्को यौ न कल्प’ना ।
एनसीबीआई रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार बेस्टिएलिटी एक प्रकारको यौ’ न हिं सा हो जसमा कुनै जनावरको प्रयोग यौ ’न स’न्तुष्टिका लागि गरिन्छ । यसको उद्देश्य केबल शा री’रिक स’न्तुष्टि हो, यसमा कुनै भावनात्मक सम्बन्ध हुँदैन ।
एनसीबीआईका अनुसार केही समुदायमा बेस्टिएलिटीलाई यौ’ न सं’क्र मित बिरामीको उपचारको रुपमा पनि हेरिन्छ । दिल्लीस्थित सेक्सोलोजिस्ट विनोद रैनाका अनुसार यस्ता व्यक्ति ‘सेडिस्ट’ प्रवृत्तिका हुन्छन् । यो पूरै एक प्रकारको दिमागी कुरा हो ।
डा. रैनाको बिचारमा बेस्टिएलिटी मुख्य दुई कारणले हुन सक्छ । एक, यौ’ न कु’ण्ठा र अर्को यौ’न कल्प’ना ।
एक रिपोर्टका अनुसार कहिलेकाहिँ बच्चाहरुले पनि यस प्रकारको हर्कत गर्दछन् तर कुनै बच्चाको सन्दर्भमा यस्तो कुरा आयो भने त्यसलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । पछि गएर यो खत’रनाक हुन सक्छ । रिपोर्टमा यस कुरामा पनि जोड दिइएको छ कि अक्सर यस प्रकारको मामिलालाई नजरअन्दाज गरिन्छ तर यस्तो गर्नु ख’तरना क हुनसक्छ ।
बेस्टिएलिटीका लागि धेरै पटक वातावरण पनि जिम्मेवार हुन्छ । धेरै पटक परिवारमा पनि से’ क्सलाई लिएर यस प्रकारको माहोल बन्छ कि मानिसहरु खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा से ’क्सको चाहनामा मानिसहरुले जनावरलाई प्रयोग गर्दछन् ।
हरियाणाको यस घ’ट नाले सबैलाई चकित पारेको छ । तर यो पहिलो घ’ट ना भने होइन । अमेरिकाको उत्तरपूर्वी फ्लोरिडामा पशुहरुमाथि हुने यौ ’न हिं’ सामध्ये बाख्राहरु सबैभन्दा बढी निशानामा पर्ने गरेका छन् ।
एनसीबीआईको रिपोर्टमा पनि एक यस्तै ‘घ’टनाको उदाहरण दिइएको छ जसमा एक १८ वर्षीय युवकले आफूले पालेका दुई बाच्छीहरुमाथि दु ष्कर्म गरे । दुई बाच्छीहरुमध्ये एउटाको मृ’त्यु भयो । त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मानिसको वी ’र्य भेटियो । युवकलाई प’क्रा उ गरेर सोधपुछ गर्दा उसले कुनै पनि पछुतो मानेन ।
१७ प्रतिशत जनावरका डाक्टरहरु मान्दछन् कि उनीहरुले हालसम्म जति जनावरको उपचार गरे, तिनीहरुमध्ये कम्तीमा एक जनावरसँग मानिसले दु ष्क र्म
भारतमा यस्तै घ ट’नामा संविधानको धारा ३७७ अनुसार मु’द्दा दर्ता गरिएको छ । भारतका साथै धेरै युरोपीय देश जस्तै नेदरल्याण्ड, फ्रान्स तथा स्विजरल्याण्ड, डेनमार्कमा यो प्रतिबन्धित छ ।
यसका अलावा जर्मनीमा पनि यो प्रतिबन्धित छ । ब्रिटेनमा सन् २००३ मा यससँग सम्बन्धित स’जा यमा संशोधन गरियो र आजीवन कारा वासको व्यवस्थालाई घ’टाएर दुई वर्ष कायम गरियो ।
यद्यपि, हंगेरी, फिनल्याण्डमा पशुसँग मानिसको यौ’ न स म्पर्कलाई अ प राध मानिँदैन । सन् २०११ मा डेनमार्क सरकारको एक रिपोर्टअनुसार १७ प्रतिशत जनावरका डाक्टरहरु मान्दछन् कि उनीहरुले हालसम्म जति जनावरको उपचार गरे, तिनीहरुमध्ये कम्तीमा एक जनावरसँग मानिसले दुष्क र्म गरेका छन् ।
एनसीबीआईको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने यस प्रकारको सम’स्या व्यक्तिहरुमा हुन्छ जो असन्तुलित जीवन गुजार्छन् । जसको बाल्यकाल घरेलु हिं’ सा र त’नावको बीच गुज्रिन्छ । यसका साथै जो बाल्यकालमा यौ ’न हिं’ साको शि’का’र हुन्छन्, उनीहरुमा पनि यस प्रकारको व्यवहारको आशं’का बढ्दछ ।
मनोवैज्ञानिक डा. प्रवीण भन्छन् कि असामान्य से’ क्सुअल एक्टिभिटीलाई पेरिफिलिया भनिन्छ । पेरिफिलिया धेरै प्रकारका हुन्छन् । बेस्टिएलिटी योमध्येको एक हो । बेस्टिएलिटी असामान्य व्यवहार र बिरामीको बीचको अवस्था हो । तर असामान्य व्यवहार मात्रै होइन । नेक्रोफिलिया यसको दोस्रो प्रकार हो, जसमा व्यक्तिले कुनै मृ’तकको साथ शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्दछ ।
यसको प्रमुख कारणमा बाल्यकालमा नराम्रो अनुभव, एक्लोपन र मा’नसि क स’मस्यालाई लिन सकिन्छ ।
डा. प्रवीण मान्दछन् कि यस प्रकारका मामला निकै कम देखिन्छ । तर यसलाई केबल बि रामी मान्न सकिँदैन । उनी मान्दछन् कि यस्ता समस्यामा शक्ति प्रदान गर्ने र सही उपचार दिने दुवै सँगसँगै गरेमा मात्र फाइदा हुनसक्छ ।
पशुसँग से’ क्स गर्ने व्यक्ति को कस्ता ?
ह्युमन एनिमल रोल प्लेयर्स- जसले जनावरका साथ कहिल्यै से’ क्स गरेनन् तर से’ क्सको इच्छा जागेपछि जनावरतर्फ आकर्षित हुन्छन् । रो मान्टिक पशुप्रेमी- यस्ता व्यक्ति जनावरलाई पालेर राख्दछन् र साइको से क्सुअलिटीतर्फ आकर्षित हुन थाल्दछन् । तर से’क्स गर्दैनन् ।
असामान्य कल्पनाशील- यसमा यस्ता व्यक्तिहरु पर्दछन् जो पशु्हरुसँग से’ क्सुअल इन्टरकोर्सको बारेमा सोच्दछन् तर त्यस्तो कहिल्यै गर्दैनन् ।
पशुसँग का’म वा’सना- यस्ता व्यक्ति पशुहरुलाई स्पर्श गर्दछन् । यी पशुहरुलाई अंगालो हाल्दछन् । उनीहरुले पशुहरुको गुप्तां गलाई पनि छुन्छन् तर से ’क्स गर्दैनन् ।
अतिउत्साही- यी पशुहरुको हरेक अं’ गलाई हेर्दछन् । धेरैपटक यिनीहरु का ’मुक नजरले हेर्दछन् । यहाँसम्मकी पशुहरुबीच हुने यौ ’न गति’विधिको बेला अलि बढी नै सक्रिय हुन्छन् ।
क्रु ’र का’मु कता- यिनीहरुले पशुहरुलाई ब’ला त्कार गर्दछन् र पी’डा पनि दिन्छन् ।
मौका परस्त- यिनीहरु यौ’ न स म्ब’न्धको मामलामा सामान्य हुनछन् तर मौका मिल्नासाथ पशुहरुलाई पनि बाँकी राख्दैनन् ।
नियमित पशुप्रेमी- यस्ता व्यक्ति पशुहरुसँग यौ ’न स’म्पर्क गर्न बढी रमाइलो मान्दछन् ।
हिंस्र’क- यिनीहरु से’ क्सको बेला पशुहरुलाई पनि मा’र्दिन्छन् । यहाँसम्म कि म’रि सकेपछि पनि उनीहरुले से ’क्स गरिरहन्छन् ।
एक्सक्लुसिभ पशुप्रेमी- यस्ता व्यक्तिहरु केबल पशुहरुसँग मात्र से ’क्स गर्छन् । बीबीसी हिन्दीबाट
प्रकाशित मिति October 27, 2020